Malite Ahịa akpaaka maka usoro ịntanetị ka ị merie karịa B2B Sales | Martech Zone
Otu n'ime ụzọ kachasị baa uru iji nweta ego site na usoro ntanetị ma ọ bụ eCourse. Iji nweta ndị debanyere aha na akwụkwọ akụkọ gị ma gbanwee ndị ahụ na-eduga n'ahịa, ị nwere ike ịnye n'efu, webinars n'ịntanetị ma ọ bụ nbudata nke ebook, ibe akwụkwọ ọcha, ma ọ bụ ihe mkpali ndị ọzọ iji nweta ndị ahịa B2B nwere ike ịzụta.
Bido usoro ịntanetị gị
Ugbu a ị chegogoro maka ịtụgharị ahụmịhe gị ka ọ bụrụ usoro ntanetị bara uru, ọ ga-adịrị gị mma! Usoro ọmụmụ n'ịntanetị bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ka atụmanya gaa n'ọrịre dị elu. Site na iji ngwa ahịa na-akpaghị aka iji rụọ ahịa ndị a, ị nwere ike ịbawanye ọnụego ntụgharị gị na-ebughi ibu ọrụ gị.
Ikpebi ihe ị ga-akụzi - Mgbe ị na-akuzi otu klaasị, dịka ọmụmaatụ gbasara ngwa ahịa akpaaka, ọ bụ ezigbo echiche ịkụzi ihe ị nwere mmasị na ya ma ọ bụ nke ị nwere nka.
Kpebie ndị na-ege gị ntị - Onye obula na acho ya otu map okporo ụzọ nke ahụ ga - enyere ha aka ịzụlite azụmaahịa ha n'ọkwa ọzọ. Ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ azụmahịa, ha chọrọ ịchọta azịza, uru, na nsonaazụ nke usoro ịntanetị nwere ike ịnye ha. Nsonaazụ nke usoro ịntanetị gị kwere nkwa kwesịrị ka akọwapụta ya nke ọma ka onye ahịa gị wee mee mkpebi ịzụ ahịa doro anya.
Gbalịa ịmepụta aha maka usoro ịntanetị gị nke na-aza njedebe njedebe achọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nsonaazụ ya bụ maka ndị ahịa gị ịbawanye ntụgharị ahịa. A N'ezie aha dị ka "Mee ka gị na mbụ $ 5,000 na ahịa na-erughị otu izu" ga-enweta nnọọ mma na-arụpụta karịa "Olee Dịkwuo Ahịa gị Business," Dị ka ihe atụ.
Kpebisie ike na gị igwe mmadụ - Dochọrọ ịnye ngwaahịa gị otu mmasị ma ọ bụ otu ndị mmadụ? Ndi ezigbo gi ahia gi bu onye n’agba ahia nke aka ha, ya na ndi n’achu ahia na intaneti ma obu ndi okacha amara ndi ozo? Ugbu a bụ oge ịjụ onwe gị ụdị onye ahịa ịchọrọ ịmasị na usoro gị.
Mepụta usoro isiokwu na isiokwu nke na-enye ndị ahịa gị uru - offọdụ n'ime usoro ịntanetị kachasị mma nwere ike ịgụnye:
Ntughari na oru ohuru
Rụ ọrụ gị n'ọzọ ọzọ
Ba ụba arụpụta ihe na okike dị mfe na obere oge
Mụta nkà na ụzụ ọhụrụ dịka AI na inwe ike imezu ma jiri ya mee ihe ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè.
Enwekwu nchebe maka ụlọ ma ọ bụ azụmahịa.
Asingbawanye ahịa na ọnụego ntụgharị na usoro ahịa ma ọ bụ ndebiri egosipụtara.
Ịnye ọnụahịa - Site na ịnye ọnụahịa, ịnwere ike ịgbanwe iwu iji gboo mkpa gị. Nwere ike ịchọpụta na ọnụahịa dị elu maka ozi bara uru ị na-enye ma nweta nsonaazụ ka mma. Fọdụ ndị na-azụ ahịa ga-enye mmeghachi omume dị mma karị ma ọ bụrụ na ịtọ ọnụego dị elu karịa ma ọ bụrụ na ịnye ya obere. Nwere ike mgbe niile lee ihe ahia ga amuta.
Ọ bụrụ n’inwetaghị azịza achọrọ, ị nwere ike ịgbanwe ọnụahịa gị oge niile ma ọ bụ nye onyinye nke ga-eme ka ndị na-azụ gị banye n’ọhịa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnye ọdịnaya maka ụbọchị 30 n'efu ma nyezie ọdịnaya ọzọ ma ọ bụ onyinye pụrụ iche na ọnụahịa ịtọ.
Akpaghị aka n'akụkụ niile nke gị Online Agụmakwụkwọ
Ellingre usoro mmụta n'ịntanetị nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Iwulite ntụkwasị obi na igosi ihe kpatara onye ahịa ga-eji tụkwasị gị obi dị oke mkpa. Mgbe ị na-enye ihe bara uru dịka webinar ozi na-akwụghị ụgwọ, akwụkwọ ozi email, eBook, ma ọ bụ akụkọ, nke gụnyere ozi nwere ike ịre ahịa nke onye zụrụ ahịa ga-ahụ baara ha uru.
N'ime oge Ibinye aha mbu, I nwere ike nnyocha ndị debanyere aha iji chọpụta ihe kachasị amasị ha ma hazie ahụmịhe ha niile n'oge na mgbe emechara. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ email na-esote nke nwere ike ịmepụta ọrụ dịka ịdebe kọntaktị email gị. Nwere ike ịmepụta ngwa ndebanye aha ngwa ngwa nke na-enyere ha aka ịbanye ọ bụghị naanị adreesị ozi-e ha kamakwa aha ha na ebe ndị nwere mmasị.
Oge a email na-esochi akpaaka ngwá ọrụ, dịka ọmụmaatụ, na-enye gị ohere izipu ozi nnabata ahaziri iche banyere usoro ịntanetị gị yana onyinye ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya iji debe gị n'ihu na n'uche ndị ahịa. Site na ịchekwa ahịa gị, ị nwekwara ike iwulite ntụkwasị obi na ogo ndị ahịa ugbu a na ndị gara aga ga-ewepụta okwu banyere ihe ị na-enye.
Soro ngwaọrụ nwere ike inyere aka ịhapụ ndị ahịa gị na ndị ahịa gị ka ha wepụta ọdịnaya na mkpọsa ndị ọzọ ma lekwasị anya na atụmatụ azụmaahịa n'ezie nke ndị ahịa na ndị ahịa ugbu a ga-aza ma nwekwuo ahịa gị.
Akpaaka Nke Nwere Ike Growzụlite Azụmaahịa Gị ma Bawanye Ahịa Ahịa Onlinentanetị
Ndepụta email gị bụ otu n'ime ihe ndị kachasị baa uru ma sie ike ị nwere maka ịzụ ahịa ịntanetị, imechi ahịa, na ịzụlite azụmahịa gị. Mee email gị depụta site na ịmepụta magnet nke ga - eme ka ndị ahịa nwee ike inye gị adreesị email ha.
Site n'inye ha ezigbo uru na ọdịnaya gị ga - eme ka ha nwekwuo ike ịnye gị ozi email ha iji nye ha ọtụtụ ihe ị na - enye ma duru ha gafere ahịa yana gaa ngbanwe dị elu site na:
Akụkọ banyere ihe ịga nke ọma nke ndị ọzọ zụrụ usoro gị na nsonaazụ ha nwetara site na ịnara ya.
O doro anya na ịkọwapụta ihe ga - eme na ndị nwere ike ịzụta gị nwere ike ịtụ anya mgbe ha ga - enweta usoro ịntanetị gị.
Ọnụahịa pụrụ iche, mmemme, ma ọ bụ onyinye ndị ọzọ nwere ike ịkwalite ha ịme mkpebi mkpebi.
About Na Na Na Na Fred
Follow Up Fred bụ chrome ndọtị nke ga-akpaghị aka na-ezigara onye na-azaghị gị ozi na-echetara gị email. Ihe ị ga - eme bụ ịgbanye ya ma hapụ Follow Up Fred ka ọ rụọ ọrụ siri ike maka gị na otu onye ga - agbaso mgbe ahụ ị ga - azaghachi ma bụrụ otu ụzọ dị nso na ire ere.
Debanye maka Soro Fred n'efu
Tags: email automation automationsochiesoro na Fredsochieemail ahịa
Micheal Habiger bụ onye edemede nwere ọdee na ahụmahụ na-enwe ahụmịhe afọ 6. Ugbu a ọkachamara ịzụ ahịa ọkachamara na SoroPred.